Fampandrosoana ny morontsiraka Reef Resilience
Mihoatra ny 2.5 arivo tapitrisa (40% ny mponina maneran-tany) miaina ao anatin'ny 100 km ny morontsiraka,ref mampitombo ny tsindry ahafahana mankany amin'ny tontolo iainana amoron-dranomasina. Ny fampandrosoana ny ranomasina mifandraika amin'ny fari-ponenan'ny mponina, indostria, ny lakandrano ary ny fotodrafitrasa dia mety hiteraka fiantraikany mahery vaika eo amin'ny sisin-dranomasina, indrindra fa ny haran-dranomasina. Mety hisy fiantraikany eo amin'ny fampandrosoana ny morontsiraka izany (ohatra: fonenana, famokarana, fitrandrahana harena an-kibon'ny tany) na tsy misy indraindray (ohatra: fitomboan'ny fandotoana sy fandotoana).
Havaozina: Tetikasa fanorenana, toy ny fanitarana ny fako, dia mety hanimba sy hanimba ny vatohara manakaiky azy. Sary © Kim Holzer / Marine Photobank; Ankavanana: Ny sabatra mivoaka avy any an-dranomasina ary napetraka amin'ny tany 'hamenoana' tora-pasika iray dia heverina fa efa nodiovina tany an-dranomasina ary nandrakotra ireo vatoharan-java-manidina malaza tany Palm Beach, Florida. Sary © Steve Spring, Reef Rescue Palm Beach County, Marine Photobank
Ny tetik'asa fanorenana any amin'ireo tanàna amorontsiraka sy vondrom-piarahamonina dia mety hiorina amin'ny tany voaangona avy any an-dranomasina. Any amin'ny faritra maro, trano fonenana maranitra nohavaozina ary niova ho any amin'ny seranan-tsambo, indostrialy, na tany an-drenivohitra. Manimba sy manimba ny vatohara manakaiky ny haran-dranomasina ihany koa ny hetsika fanosihosena (ohatra: fantsona rano, seranan-tsambo, seranana) ary fanodinana fitaovana fako any amin'ny morontsiraka sy ny morontsiraka.
Ny fandripahana ny ala sy ny fanesorana ny zavamaniry dia mety miteraka fisondrotana eo amin'ny rano amoron-dranomasina. Ny ala honko, ohatra, dia mampitombo ny kirany, ny lozam-pandrefesana, ary ny fanodinana ny loto sy ny vokatra fanesorana amin'ny fikajiana ny morontsiraka. Izany dia mitondra amin'ny fanafahana fitaovana organika sy fantsom-panafody izay afaka misasa sy manala ny vatohara ary manova ny simia momba ny rano.
Tandindomin-doza sy fambolena alika avy any amin'ny renirano akaikin'ny Repoblika Dominikanina. Sary © Jeff Yonover
Ny fanavahana ny tany sy ny tetik'asa dia mety hanova ny drafitra voajanahary voajanahary, izay ahafahana manondraka rano, sakafo, ary fanariana fantson-drano amin'ny vatohara akaiky. Ny sedimenta dia afaka manala mivantana ny harambato na mampitombo ny hatezerana any amin'ny ranomasina amoron-dranomasina, izay mampihena ny fahazavana azo amin'ny vatohara sy ny fombany zooxanthellae. Ny vatany dia miankina amin'ny zooxanthellae mba ahafahana mamorona sakafo avy amin'ny photosynthetique, noho izany ny fahavoazan'ny fahazavana dia mety hiteraka mosary. Na dia misy vatoharan-dranomasina sasany aza ao anaty rano manjavozavo, dia tsy dia misy fahasamihafana loatra ny vatohara ary voafetra kokoa amin'ny faritry ny halatra noho ny rano madio.ref Ny fampifangaroana ny fampihorohoroana, fampiasana indray ary fametrahana ny fandoahana dia mety hametra ny fitomboan'ny haran-dranomasina, ny fiterahana, ny photosynthese, ny fandraisana mpiasa ary ny sisa velona.
Ny vatoharan-dranomasina dia miova amin'ny rano ambany, ary mety ho tena mahasalama ny fiaraha-monina amin'ny vatohara ny fanampiana ireo sakafo mahavelona. Ireo sakafo mahavonjy tafahoatra dia mampiroborobo ny macroalgae izay afaka mampitombo ny vatohara ary manakana ny fitsaboana ny larval.
Ny fitrandrahana dia iray amin'ireo loto lehibe indrindra eran-tany, ary maro amin'ireo firenena izay manana haran-dranomasina marobe dia tsy dia misy loatra ny fitsaboana. Ohatra, Azia atsimo atsinanana, Pasifika, ary Karaiba dia mamoaka ny 80-90% ny rano fisotro madio izay tsy natrehana tany an-dranomasina. ref Ankoatra izany, ireo loto mpanimba amin'ny indostria (ohatra, ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany), ny toekarena ary ny fambolena, ary koa ny tokantrano, fiara, zaridaina, ary kianja golf dia manasa ny tontolo iainana amoron-dranomasina. Ny toeram-pitsaboana rano sy ny orinasa mpamokatra herinaratra dia mety hamoaka solika any amin'ny faritra amoron-dranomasina, ary manova tanteraka ny simia momba ny rano ao amin'ireny faritra ireny.
Fiantraikany amin'ny fampandrosoana ny tany
Ireto misy ireto manaraka ireto:
Ny Mangroves dia mametraka sakana iray eo anelanelan'ny tany sy ny ranomasina, fanivanana sedimenta sy solika avy amin'ny fandosirana amoron-dranomasina ary ny fiarovana ny morontsiraka amin'ny tafiotra. Sary © Katie Fuller 2009 / Marine Photobank
Tetikasam-panorenana (baoritra, lakandran-tseranana, lozam-pifamoivoizana, dike, famerenana ny tany, sns ...) - Afaka mamono mivantana ny vatohara
Fampihenana ny haran-dranomasina - dia mety hahatonga ny fidiram-bolan'ny ankamaroan'ny fizahan-tany any amin'ireo firenena izay miankina amin'ny fizahan-tany amin'ny sehatry ny onja ary mampihena ny isan'ny trondro
Tetezana amoron-dranomasina - dia mety hiteraka olana ara-pahasalamana, fanodinana ririnina, fanodinana indostrialy, ary fiovan'ny rano sy ny hazondamosina, izay mety hisy fiantraikany amin'ny fiakaran'ny karazan-tsakafo sy ny fikorianan'ny metabolika ary koa ny famonoana mivantana ny haran-dranomasina mivantana.
Fanamboarana vatohara - Mety hahatonga ny fiparitahan'ny tora-pasika, ny fialana an-tanety, ary ny fanosihosena
Sedimentation - dia mety hitifitra haran-dranomasina na hampitombo ny fikorontanan'ny rano amoron-dranomasina, ka hampihena ny fahazavana ilaina amin'ny fitomboan'ny haran-dranomasina sy ny fivelomana
mpandoto - dia mety hitarika amin'ny fitomboan'ny aretin'ny vatohara sy ny fiainana an-tany, hiteraka fiovan'ny rafitry ny fiompiana haran-dranomasina, ary hanakanana ny fitomboan'ny haran-dranomasina, ny fanenoman-tena ary ny fametrahana larval (ohatra: ny fanamafisana ny sakafo dia mety hitarika mankany amin'ny voninkazo ala izay mampitombo ny fitomboan'ny haran-dranomasina)
Fitrandrahana vatohara ho an'ny fanorenana - dia mety hitarika fahavoazana ara-toekarena maharitra noho ny tombotsoa very amin'ny fisian'ny fisaka, ny fiarovana ny morontsiraka, ny fizahan-tany, ny fiarovana ara-tsakafo, ary ny zavamananaina isan-karazany.
Raha mitombo ny isan'ny mponina amoron-dranomasina ary ny fiarovana ny morontsiraka voajanahary dia simba na very, fiakarana amoron-dranomasina ary fiovan'ny toetr'andro dia mety hampitombo ny fiantraikan'ny asa fampandrosoana amoron-dranomasina mampidi-doza. Ny fiantraikany eo an-toerana amin'ny loharanom-pihariana avy amin'ny tany dia hitranga miaraka amin'ny manerantany manerantany sy ny faritra, toy ny fiovaovan'ny toetr'andro, ny fomba fampiasana ny tany, ary ny fidoboky ny ranom-boasary, izay manohintohina ny fiverenan'ny fiompiana harena an-dranomasina. Ohatra, mitombo ny fiantraikany amin'ny rivotra mifandraika amin'ny fiovan'ny toetrandro dia mety hampitombo ny fisintahan'ny sedim-panafody sy ny loto hafa.
Ny fampihenana ny vokatry ny fivoarana amoron-dranomasina dia zava-dehibe tokoa; Mampidi-doza ny 25% amin'ny haran-dranomasina eran-tany, indrindra any Azia atsimo atsinanana, ary ny Indiana sy ny Oseana Atlantika.ref Ny fiantraikan'ny fampandrosoana amoron-dranomasina dia mety henjana Nihena tamin'ny alalan'ny drafitra mahomby sy ny fitsipika fampiasa amin'ny tany. Ohatra, ny drafitra fandaharam-potoana sy ny fitantanana dia mety ahitana drafitra sy fepetra zoningin'ny zana-tany, ny fiarovana ny toeram-ponenana amorontsiraka (toy ny honko), ny tsy fahampian-drano amoron-dranomasina izay mametra ny fampandrosoana amin'ny toerana lavitra ny moron-dranomasina, ny fitantanana ny fitantanana ny rano, ny famokarana sy ny fitsaboana ny rano madio ny fako ary ny fitantanana ny fizahan-tany amin'ny ambaratonga maharitra.
Fandaharanasa momba ny harena voajanahary NOAA - Fiantraikany amin'ny loharanon-tany voajanahary
ReefBase - Tahotra
Fandalinana toe-javatra: Fampandrosoana sy fanodinana fako any amin'ireo firenena Federaly Mikronezia (FSM)